Car Rare Camera Or Bus Rare Camera အား ကမာရွတ် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
Car Rare Camera Or Bus Rare Camera
နောက်ကင်မရာလေးကို Rocket တွင် ဝယ်လို. ရပါပြီ။
12V နဲ. 24V နှစ်ခု စလုံး ရပါတယ်။
ညရိုက်ဖို.အတွက် Night Vision လည်း ပါပါမယ်။
TV box သို. monitor နဲ. ချိတ်ဖို. တိုက်ရိုက်ကြိုးပါဝင်ပြီး
ဖြူနီ ကြိုး နှစ်ချောင်းချိတ်ရုံနဲ. အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကားရှေ.မှာ အစုံ အသုံးပြုနိုင်ပါမယ်။
ခေါင်းမတူရင်လည်း ခေါင်းလဲ ပြီး အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဈေးနှုန်း – 27000 kyats
VR BOX 3D ကြည့်စက်
အမည်: Car Rare Camera Or Bus Rare Camera